Nhoroondo yekambani - Hebei Mujiang Kunze Uye Kunze Kutengesa Trade Co., Ltd.
Hebei Mujiang imupota uye ekisipoti kutengeserana Co., Ltd., yakavambwa mu2019, iri mukamuri 2003, No.8 Ruicheng yekuvaka hofisi yenyika, Chang'an District, Shijiazhuang guta. Yayo bhizinesi chiyero inovhara yekuzvishandira-yega uye agency kupinza uye kutumira kunze kune yakasarudzika imba midziyo, yakagadziriswa matanda madhoo, aluminium alloy madhoo nemahwindo, Hardware, waya mesh uye magirazi mabhokisi, ine yegore kupinza uye kutengesa huwandu hwemamirioni mashanu emadhora ekuAmerica.
Ainyanya aivigirwa kuna Europe uye United States uye dzimwe nyika, akagadza yakanaka-refu bhizimisi uye wezvokutengeserana vokukurukura Southeast Asia, Europe uye dzimwe nyika, akaziva pamwero upfumi ekisipoti pamwe musika, okutengesa samambure uye kugadzirwa chawo, izvo zvinotsigira bhizinesi rekutengesa kunze uye kusimudzira kwakatarisa kunoona kunze kwenyika kudunhu redu.
Hunhu hwekutanga, mutengi wepamusoro, sevhisi yekutanga-chiyero.
Tine timu yedu yakakosha yekupa sevhisi yakanakisa, Nhengo dzeboka redu dzakaumbwa nematarenda akasiyana. Tinogona kupa ese ese maitiro ekufunga kune vatengi nemitauro yakasiyana. Uye zvakare, isu tine nyanzvi mushure-kutengesa kutungamira vashandi. Kana iwe uine chero mibvunzo nezve zvigadzirwa, tinogona kutaurirana nemumwe pasina zvipingaidzo chero nguva, kuti tigadzirise matambudziko ako akasiyana.
Kune chimwe nechimwe chigadzirwa chatinotengesa, tine yakasimba yekudzora mhando, tichava nevashandi vakakosha kuti vatarise maitiro ekugadzira uye kurodha maitiro kuona kuti zvigadzirwa zvedu zvinogona kusvika pamaoko ako zvakachengeteka.Uye ticharamba tichisimbisa mhando yezvigadzirwa usati waendesa, saka sekuona kuti hapana kana matambudziko zvinhu zvisati zvabuda mufekitori.